2021 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Mi နဲ့ Redmi တွေအတွက် Stable MIUI 12 Firmware တွေကို Download ရယူနိုင်ဖို့ ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်...
Download MIUI 12 Stable Firmware :
Maung Pauk at 7:30:00 AM 2
Honor ဟာ သူ့ရဲ့ X20 Series ကို သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၇ နာရီ မိနစ် ၃၀ မှာ ကြေညာတော့မယ်ဆိုတာ တရားဝင်ဖေါ်ပြလိုက်ပါပြီ..
Honor X20 Series ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေဘာတွေဖြစ်မလဲ...
Cortex-A78 cores (clocked @2.4GHz) နဲ့ six Cortex-A55 cores (clocked @2.0GHz)တွေအပြင် GPU ကို Mali-G68 MC4 နဲ့ပေါင်းစပ်ပေးထားတဲ့ 6nm နည်းပညာသုံးထားတဲ့ Dimensity 900 chipset ကိုတပ်ဆင်ပေးထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်..
66W Wired Fast Charging စနစ်နဲ့ အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကင်မရာ ၃ လုံးနဲ့ Led Flash မီးတွေကို အဝိုင်းပုံပြုလုပ်ပေးထားပေးမယ်ဆိုတော့ Mate 40 လိုဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်ပါမယ်.. အဓိက ကင်မရာကို 64 Megapixel နဲ့တပ်ဆင်ပေးထားပြီး ရှေ့ဘက်မှာတော့ Dual Punch-Hole straight screen display ကို 120 Hz ထိ အထောက်အပံ့ပေးထားမယ်ဆိုသိရပါတယ်..
သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဖေါ်ပြသမယ့် Mi Mix4အလန်းစားကြီး
Maung Pauk at 9:00:00 PM 0
Xiaomi ဟာ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ အကြမ်းစား Mi Mix4ကို ကြေညာတော့မယ်ဆိုတာ သေချာသွားပါပြီ..
ကြေညာတော့မယ့် Xiaomi Mi Mix4မှာ Snapdragon 888 chipset ကိုအသုံးပြုထားပြီး 120W Charging စနစ်လည်းပါလာမယ်၊ Mi 11 Ultra လိုကျောဘက်မှာ Display လည်းပါလာမယ်၊
ကျောဘက်ကင်မရာ ၄ လုံးတပ်ဆင်ပေးထားပြီး ဆယ်ဖီအတွက် ရှေ့ကင်မရာကိုတော့ Under Display ထဲမှာထည့်ပြီး ဖျောက်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်..
RAM 8 GB နဲ့ ROM ကိုတော့ 128GB ကနေ 256GB ထိ အထောက်အပံ့ပေးထားနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်.. Model Number ကို 2106118C လိုသတ်မှတ်ထားပြီး ၁၀.၈.၂၀၂၁ ကြသပတေးနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်မှာ ကြေညာမယ်လို့ဆိုပါတယ်..
Computer software Photo Editor Windows Software
Maung Pauk at 8:15:00 PM 0
ဓာတ်ပုံတွေကို Artificial Intelligence နည်းပညာနဲ့ Editing လုပ်ပေးတဲ့ သိပ်မိုက်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. သာမန်ပုံတွေကို Portrait ပုံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲမလား၊ အသားအရည်ရဲ့အရောင်အသွေး/အနေအထား တွေကို သဘာဝနဲ့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးချင်သလား၊ Landscape ပုံတွေကို အမိုက်စားတွေ ဖန်တီးချင်သလား ဒီ Luminar AI က သိပ်ကို စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပါတယ်..
Luminar AI, the first image editing softwareIt is based on artificial intelligence, which makes image editing work faster and more extraordinary. The new and innovative techniques used in this program provide you withanew world of possibilities to express your ideas, on the other hand, artificial intelligence performs tedious tasks and you can focus on your creativity. There are various capabilities in this program so that you can use different techniques in different situations, for example Infinite Pix is ​​a feature that allows you to achieve great results even in low quality images, with PhotoXpanse you can create effects Add 3D to your images foradeeper atmosphere, and with the help of Luminar AI-trained professional image networks, you will create professional results with the help of AI.
Full version ဖြစ်အောင်လုပ်နည်းကတော့ Setup နဲ့ Install လုပ်ပြီးသွားရင် Crack ဖိုဒါထဲက Common.Web.dll ကို Copy ကူးပြီး Desktop ပေါ်က Luminar icon ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်.. Paste ချ.. Replace တောင်းရင် သဘောတူလိုက်ပါ.. ပြီးရင် Crack ဖိုဒါထဲက Reg ဖိုင်လေးကို Run ပြီး OK ပေးလိုက်..
နောက်တဆင့်က Notepad ကို Run as Administrator နဲ့ဖွင့်ပါ.. ပြီးရင် Crack ဖိုဒါထဲမှာပေးထားတဲ့ စာတွေကိုကူးပြီး Paste ချပါ.. Save လုပ်ပေးလိုက်ပါ..
Purchase Here : https://skylum.com/luminar-ai-b
Luminar AI 1.4.0.8325 Multilingual x64 : 887 MB
Computer software Video Editing Windows Software
Maung Pauk at 7:28:00 PM 0
ကွန်ပျူတာ သိပ်အမြင့်စားတွေမလိုဘဲ အရည်အသွေးမြင့် Video တွေကို Edit လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..
Wondershare Filmora isasimple and professional video editor . With this software, you can turn your precious moments intoastunning movie and share it everywhere. Use the Filmora editor to express your creativity and stunning results. With this movie editor you can add music, animations, graphic effects and various filters to your movie.
Text and title : Create beautiful animated messages from the text and title library
Music Library : Add your favorite music directly to the movie
Picture in Picture (PIP) : Put multiple videos in one frame. Layer the film toaframe and add different angles
Add video, images and audio in various formats
Audio: MP3, WMA, WAV, M4A, AAC, AC3, OGG and more
Purchase Here : https://filmora.wondershare.net/filmora-video-editor.html
Download Wondershare Filmora X 10.1.20.16 x64: 311.59 MB
Computer software Downloader Internet Download Manager PC Downloader Windows Software
Maung Pauk at 5:38:00 PM 0
2021 ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ ထွက်ထားတဲ့ IDM ( Internet Download Manager ) 6.32 Build2ကို Full Version Free သုံးချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Download IDM 6.39 Build2Full : 9.9 MB
Password : maungpauk.org
ကျွန်တော်သုံးဖူးသမျ ပိုက်ဆံမပေးဘဲသုံးလို့ရတဲ့ VPN တွေထဲမှာ အမြန်ဆုံးနဲ့ အဆင်အပြေဆုံး VPN ကတော့ 1111 vpn (CloudFlare WARP+ vpn) ဖြစ်ပါတယ်.. ဖုန်းအင်တာနက်တွေ ပိတ်ထားတာတောင် ဒီ VPN နဲ့ သုံးလို့ရတဲ့အခါ ရှိတယ်.. အခု ဒီပို့စ်ကိုတင်နေစဉ်မှာ MPT, Ooredoo, Telenor တွေ ဒီ VPN နဲ့ ဖုန်းအင်တာနက်သုံးလို့ရပါတယ်.. အခြား vpn တွေလို Facebook မှာ ပုံမပေါ်တာမဖြစ်ပါဘူး..
ဒီပို့စ်ကို မြင်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေဟာ တနည်းနည်းနဲ့ အင်တာနက်ရနေသေးတယ်ပေါ့..
ဒီတော့ 1111 vpn ကို PlayStore ကနေ Install လုပ်လိုက်ပါ.. PlayStore အဆင်မပြေရင် အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ..
အသုံးပြုဖို့အတွက် Data လိုတယ်ဗျ.. Data ကို ရယူဖို့ နည်းလမ်း ၂ ခုရှိတယ်..
ပထမနည်းက ပိုက်ဆံနဲ့ပေးဝယ်ရတာ.. ဒီနည်းကို စိတ်မဝင်စားလောက်ပါဘူး..
နောက်တစ်နည်းက သူငယ်ချင်းကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး တစ်ယောက်အသုံးပြုတိုင်း ကိုယ်က Data 1GB စီရတဲ့နည်း.. ဒီနည်းကိုလည်း ကျော်ခွပြီး Data ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်.. နည်းလမ်းပြောပါပါမယ်..
ပထမဆုံး အောက်ကလင့်ကနေ Application ကိုဒေါင်းပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ..
App နာမည်က 1GB WRAP+ လို့ခေါ်တယ်.. ကိုနေရှိန်းဦး ရေးထားတာ..
1. 1111vpn ကိုဖွင့်.. ညာဘက်က မျဉ်းလေး ၃ ကြောင်းကိုနှိပ်..
2. Advanced ကိုနှိပ်
3. Diagnostics ကိုနှိပ်
4.ID အောက်က ဂဏန်းလေးတွေကိုဖိ Copy ယူ. ပြီးရင်
ခုနက Install လုပ်ခဲ့တဲ့ 1GB WRAP+ ကိုဖွင့်.. ပြီးရင် Start ဆိုတဲ့ အနီခလုတ်ဘေးကအကွက်ထဲမှာထည့်ပြီး Start ကိုနှိပ်လိုက်.. စက္ကန့် ၃၀ တိုင်းကို 1GB ယူပေးနေလိမ့်မယ်..
ကိုယ့် 1111 vpn မှာ Data တွေတိုးလာတာကို မြင်ရလိမ့်မယ်.. တကယ်လို့ Data တိုးတာတာမမြင်ရဘူးဆိုရင်−
1111vpn ကိုဖွင့်.. Setting ထဲက Advanced ထဲက Connection Options ထဲက Reset Security Keys ကိုနှိပ်ပါ..Key successfully reset ပြရင် Data တိုးလာတာကို မြင်ရလိမ့်မယ်..
Android Application Android Tool FRP-Tools
GOOGLE ACCOUNT Bypass apk 2021
Maung Pauk at 11:44:00 AM 0
Android ဖုန်းတွေအတွက် Google Account Bypass လုပ်ဖို့ လိုအပ်သမျ apk တွေဖြစ်ပါတယ်..
ဖုန်းထဲကနေ တိုက်ရိုက်ရှာမယ်ဆိုရင် www.maungpauk.org လို့ရိုက်ထည့်ပြီး အပေါ်တန်းမှာ FRP Unlock Apps ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ..
Download Google Account Bypass apk 2021
Computer software FRP-Tools Windows Software
Unlock Tool (OMH QC Service Tool v1.6)
Maung Pauk at 11:35:00 AM 0
Developer Ohn Min Htet ကိုယ်တိုင် သူ့ရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရ ပြန်လည်မျှဝေထားတဲ့ Unlock Tool ( Service Tool) ဖြစ်ပါတယ်..
" မွေးနေ့မှာ ကျွှန်တော့် အတွက် ဆုမတောင်းပဲမြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး လိုအပ်နေသော ဆု လေးတောင်းရင်းနဲ့ 🙏🙏 ကျွှန်တော်ချစ်သော Mobile Service ညီအကို မောင်နှမများ အတွက် ကျွှန်တော်တစ်ချိန်တုန်းက ရောင်းခဲ့တဲ့ OMH Qc Service Tool V1.6 ကို Free မျှ ဝေပေးခဲ့ပါတယ်...
ဒါ့အပြင် ကျွှန်တော့် Paid Group & Tool ကိုလဲ အရင် ထက် စျေးနူန်း လျော့ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ☺️☺️
ဘာတွေအသုံး ပြုလို့ရနိုင်သလဲ ဆိုတော့...
တွေကို Userlock/Frp/Account ကို Remove လုပ်နိုင်မဲ့ အပြင် တခြား လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ😊"
Download : 26.46 MB
Credit : Ohn Min Htet
USA VPN Get IP New Application for Android
Mr. Win Hlaing at 5:10:00 PM 0
တ႐ုပ္ရဲ့ လုပ္ရက္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္မယ္လို့ ေျပာၿပီးေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အင္တာနက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို့ လုပ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ကို အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းျပလိုက္တဲ့ အေမရိက (USA VPN Get IP) အဖြဲ႕ကို ေက်းဇူးတင္ရမွာပါ။ လက္တေလာ တ႐ုတ္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး အင္တာနက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို့ လုပ္ေနတယ္တဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္ USA VPN ႏွစ္ခုကို မိတ္ေဆြတို့ အသုံးရန္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ (USA VPN Get IP) လို့ အမည္ေပးထားတဲ့ ဒီေဆာ့လ္ဝဲေလးရဲ့ လုပ္နိုင္စြမ္းကေတာ့ အံ့မခမ္းလို့ေျပာရမွာပါ။ တေန႔ကို (50 MP) အသုံးရင္ ေနာက္ေန႔ဆို (100MP) အသုံးျပဳနိုင္ၿပီး ေနာက္တေန႔မွာဆို (150 MP) အသုံးျပဳလို့ ရတဲ့ လုံးဝထိန္းခ်ဳပ္လို့ မနိုင္ေဆာ့လ္ဝဲေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အင္တာနက္ မပိတ္ခင္ ခ်က္ခ်င္းေဒါင္းယူထားပါလို့ ေျပာပါရေစ။ ေအာက္က Link မွာ ဝင္ေဒါင္းယူပါ။
Unlimited – VPN Master
သုံးနေသမျ အလကားရတဲ့ VPN ထဲမှာ အမြန်ဆုံး နဲ့ အဆင်အပ...